विशाल पहिराको मुन्तिर बुटवल बजार निरीह, किन जाँदैछ चुरेमा पहिरो « News24 : Premium News Channel
विशाल पहिराको मुन्तिर बुटवल बजार निरीह, किन जाँदैछ चुरेमा पहिरो
भीष्मराज ओझा/निरा गौतम
रुपन्देही। बुटवल बजारबाट उत्तरतिर नजर डुलाउँदा सधैँ देखिने हरिया पहाडतिर अहिले आँखा डुलायो भने अत्यास लाग्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको तिनाउ नदी वारि र पारिका चुरे पहाडलाई पहिराले छियाछिया पारेको छ ।
दुवैतिरका चुरेमा खसेका साना–ठूला पहिराहरुले यी पहाडलाई सख्त घाइते तुल्याएको स्पष्ट देखिन्छ । विशाल पहिराको मुन्तिर देखिने बुटवल बजार निरीह छ । यस वर्ष उपमहानगरको वडा नं ३ मा पर्ने ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै करिब ७० हेक्टर क्षेत्रमा पहिरो गएको छ । यो विशाल पहिरो एकैचोटी गल्र्यामगुर्लुम गएन । गत वर्षदेखि नै स–साना पहिराहरु जान थालेको र यसपालि सामान्य वर्षा हुँदा पनि हिलो र लेदो झर्न थालेकाले पहिरोमुनिको बस्ती सचेत भएर बसेको थियो । जसका कारण कुनै मानवीय क्षति हुन भने पाएन ।
यो भीमकाय पहिराको मुन्तिर अवस्थित सहरको भविष्य के होला ? के साँच्चै अहिलेको अवस्थामा देखिएको चुरेको पहिरो वर्षातहरुमा थामिएला ? यी विषयमा अहिले बुटवल क्षेत्रमा छलफल हुन थालेका छन् । विकासोन्मुख सहरमा देखिएको यो जोखिमले स्थानीयवासीमा चिन्ता जगाइदिएको छ । “समयमै चुरेको पहिरो नियन्त्रणका लागि पहल नगर्ने हो भने बुटवलको उत्तरी क्षेत्र पहिरामा मिसिन सक्छ”, चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक कमल गौतम भन्नुहुन्छ, “अब पनि ढिलाइ भयो भने ठूलो क्षति हुने खतरा छ, यसमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
अघिल्लो वर्षातमा सङ्केत देखिएको थियो
बुटवल क्षेत्रमा चुरेको पहिरो अहिले मात्रै आएको होइन । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–३ ज्योतिनगर क्षेत्रमा विसं २०३३ बाटै पहिरो देखिन थालेको थियो । विसं २०५५ मा वडा नं ३ र ४ का ५७ घर विस्थापित नै गर्ने गरी ठूलो पहिरो आयो । त्यसले लामो समयसम्म ज्योतिनगर क्षेत्रलाई त्रासमै राख्यो ।
सरकारले सामान्य तटबन्धलगायतका काम गरे पनि भरपर्दो व्यवस्था गरेन । त्यतिबेला स्थानीयवासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाएर स्थानान्तरणसमेत गरियो । पछि विस्तारै पहिरो थामियो र हरियाली भयो । विसं २०५५ देखि २०७१ सम्म आइपुग्दा पहिरो गएको स्थानमा फेरि रुख बिरुवा हुर्किएपछि पहिरो गएको क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । पहिरो रोकिएपछि स्थानान्तरण गरिएका परिवार पनि ढुक्कसँग त्यहीँ बस्न थाले । घरजग्गा किनबेच हुन थाल्यो । स्थानीयवासीले मात्र होइन, स्थानीय सरकारले समेत पहिरो बिर्सियो ।
अघिल्लो वर्ष साउन २८ गते बुटवल र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका र बुटवल आसपासमा भीषण वर्षा भयो । करिब पाँच घण्टा लामो उक्त वर्षाले तिनाउ गाउँंपालिकाको दोभानलगायतका क्षेत्रमा क्षति पु¥यायो । केही घर पनि पुरिए । रातिको समयमा भएको भारी वर्षाले तिनाउ नदीमा पनि भयङ्कर बाढी आयो । रातभर भएको भारी वर्षापछि बिहान उठ्दा बुटवलमाथिका चुरे पहाडमा साना–साना पहिराका थुपै्र दृश्यहरु देखिए । स्थानीय केही मिडियाले चुरेमा आएका स–साना पहिराले जोखिम निम्त्याएको समाचार पनि लेखे । केही अगुवाहरुले जोखिम हुनसक्ने ठानेर आवाज उठाएका पनि थिए । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका केही घरमा चुरेबाट बग्ने साना खोलाले ल्याएको गेग्रेटो नै पस्यो तर जिम्मेवार निकायले ध्यान पुर्याउन सकेन ।
“स्थानीय सरकारले भाडामा बसेको रकम दिने भने पनि अहिलेसम्म दिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने राहतस्वरुप प्रतिपरिवार रु १५ हजार पाएका छौँ”, मल्ल भन्नुहुन्छ, “हामीलाई राहत होइन, पहिरो नियन्त्रण भए पुग्छ ।” विसं २०५५ को पहिरोसमेत बेहोर्नुभएकी मल्लसहित त्यहाँका स्थानीयवासीलाई बुटवलको तामनगरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर मल्ल त्यहाँ बस्नुभएन । “तामनगरमा पनि खोलाकै किनारमा हामीलाई १० धुर जग्गा दिइएको थियो तर, यहाँ घर बनाएर बसिसकेकाले छोड्न मन लागेन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले यहाँबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुभन्दा पहिरो नियन्त्रणका लागि योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चुरेमा पहिरो जानुको खास कारण विज्ञहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् तर मौसममा आएको परिवर्तन, मानवीय अतिक्रमण, सडकलगायतका पूर्वाधारका नाममा भएका चुरे क्षेत्रको विनास र विसं २०७२ मा आएको भूकम्पलाई नै कारण मानिएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वय एकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो र यस वर्ष छोटो समय तर भारी वर्षा चुरे क्षेत्रमा भयो । हुन त बुटवल क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा धेरै पानी पर्ने क्षेत्र हो । दक्षिणतिरबाट जलवाष्प बोकेर आएको बादल वसन्तपुर र नुवाकोटका अग्ला डाँडामा ठोक्किँदा यहाँ पानी परिरहन्छ । पछिल्ला केही वर्षहरुमा धेरै पानी परेको महसुस नभए पनि यो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले बढी पानी पर्ने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । मनसुन सक्रिय भएको बेला यहांँ ठूलो र धेरै पानी पर्ने सम्भावना सधँै रहन्छ । हिउँद वा प्रिमनसुनका बेला पनि अरु ठाउँको तुलनामा यहाँ पानी परिरहन्छ । ज्योतिनगरमाथिको चुरेमा छवटा पानीका मुहानसमेत छन् ।
चुरेमा गएको पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले भने कुनै योजना बनाएको छैन । नयाँ सरकार गठनपछि भागबण्डामै अलमलिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन् । अधिकांश मन्त्रालय टुक्रिएपछि जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत हुन नसक्दा मन्त्रालयका कामले गति लिनसकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयबाटै भयानक पहिराको दृश्य देखिँदासमेत ठोस योजना बन्न सकेको छैन । – रासस